ပင်လယ်သေမှသက်သေများ | My Diary
← နောဧ သဘောင်္တွေ့ပြီ	Cute Pictures Of Dogs →	ပင်လယ်သေမှသက်သေများ	Apr 15
အတွေးအခေါ်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတစ်ခုဖြစ်စေ၊ လက်ခံ
ကျင့်သုံးသောဥပဒေသတစ်ခုဖြစ်စေ မိမိယုံကြည်သော ကိုးကွယ်သော လက်ခံကျင့်သုံးသော အရာသည်မည်မျှမည်ရွေ့ ခိုင်မာသည်၊ ယုံကြည်လောက်သည် သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင် လောက်သည် ဆိုသောအချက်သည် အလွန်အရေးကြီးလှပေသည်။ ထို့အပြင်မိမိ၏ ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာသည် ယုံတမ်းစကားသို့မဟုတ် ပုံပြင်လေးတခုမျှအဆင့်
လွန်ခဲ့သောလက Dead sea Scroll နှင့်ပတ်သက်ပြီး “ပင်လယ်သေမှသက်သေများ” ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို တချို့မှတ်မိဦးမှာပါ။ အခု Dead Sea Scroll နဲ့ပါတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အလက်အချို့ကို
Posted on April 15, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← နောဧ သဘောင်္တွေ့ပြီ	Cute Pictures Of Dogs →	Leaveacomment